भाइरल तस्बिर: नाङ्लो पसल र जनगायक जीवन शर्मा « Rara Pati
२० मंसिर, काठमाडौं । रेडियो कार्यक्रमको शिलशिलामा सात–आठ वर्ष अघि जनगायक शर्मालाई अनामनगर, घट्टेकुलोस्थित उनको डेरामै गएर भेटेको थिए । दुई वटा साघुरा कोठामा निक्कै सामान्य तवरले दैनिकी गुजार्नेगरी बसोबास गरिरहेको अवस्था थियो । त्यसपश्चात् पनि बेला-बेलामा काधमा पुरानो छड्के झोला हालेर बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा भेटेको थिए ।
त्यतिबेला सर्वहारा वर्गका आवाज वुलन्द पार्ने सर्वप्रीय गायकको जिवनशैली देखेर मलाई बडो अनौठो लागेको थियो । र यो पनि लागेको थियो कि नेताले भाषण गरेर भन्ने कुरालाई गीतबाट जनताको मन, मस्तिष्क छुनेगरी भनिदिने गायकलाई राज्यबाट यति ठुलो अपमान किन ? हिजो उनीसँगै भाषण गर्नेहरू महलमा अनि जीवन शर्मालाई मज्जाले हावा र घाम छिर्ने कोठा पनि छैन ? भन्ने प्रश्न मानस्पटलमा उब्जिएको थियो ।
आज बिहानै के छ त नयाँ नौलो भनेर यसो फेसबुक हेर्दै थिए झट्ट नाङ्लो पसलसँगै जनगायक शर्माको फोटो दखेँ । तस्बिर माथि लेखिएको थियो ‘सर्वहारा जनताका गायक वीवन शर्मा नाङ्लो पसल गरेर जीवन निर्वाह गर्दै’ यस्तै भावमा । कुनै चीरपरिचित नेताले नाङ्लो पसल सुरु गरेको भए अनौठो लाग्थ्यो होला तर जीवन शर्माले नाङ्लो पसल गर्नुभयो भन्दा मलाई अनौठो लागेन । किनकी मलाई थाहा छ, वर्षौँदेखि जनगायक शर्मा नाङ्लो पसलेको जस्तै निक्कै सादा जिन्दगी बाँचिरहेकै छन् ।
बिहान मेरो ध्यान आकर्षण गरेको त्यहि तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेको रहेछ भन्ने जानकारी बलुेकी पाए । तस्बिरमा उनी सडकमा पसल थापेर बसेका छन् । नाङ्लो र क्रेटमा मकै, खुर्सानी र कागती बेच्न राखिएको छ । जीवन शर्मा ग्राहक कुरेर बसेझै देखिन्छ । तर, तस्बिरमा देखिने दृश्यको वास्तविकता भने फरक छ ।
खासमा उक्त नाङ्लो पसल जीवन शर्माको नभएर मैतीदेवीस्थित एक महिलाको रहेछ । ती महिलाले सडकछेउमा पसल राखेकी थिइन् । दुई महिनाअघि सडकमा हिँड्दै गर्दा जीवन शर्मा त्यही पसलनजिक पुगे । उनी रमाइलो मान्दै केहीबेर पसल अगाडि बसेका थिए । गायक शर्माका अनुसार त्यतिवेला कसैले खिचेको तस्बिर अहिले भाइरल भएको हो ।
फोटोसँग जोडिएको रहस्यलाई उद्घाटन गर्दै गायक शर्माले भनेका छन्, ‘खासमा त्यो पसल मेरो होइन, एकजना बहिनीले मैतीदेवीमा राख्नुभएको पसल हो, हिँड्दै जाँदा यसो रहर गर्दै म पसलमा बसेको थिएँ, त्यतिवेला सडकमा उभिएकाहरूले फोटो खिच्नुभएको थियो, अहिले भाइरल भएछ, अन्यथा नलिन अनुरोध गर्दछु ।’
जनताका दुःख, भरियाका कथा, ब्यथा बोल्ने गायक शर्मा नाङ्लो पसल छेउमा गएर बस्नु खासमा कुनै नौलो विषय होइन । कालो केश, पोटिलो अनुहार भएदेखी नै जनताका गीत गाउन थालेका गायक शर्मा अहिले कपाल सेताम्य भएर अनुहार चाउरी परुन्जेलसम्म पनि जनताकै गीत गाउदै छन् । तर राज्यमा पुग्नेहरूले भने उनका गीतलाई अथ्र्याउन चाहेको देखिदैन ।
जनगायक जीवन शर्मा